पति पारस शाहको राम्रा र नराम्रा बानीहरुको भेद यसरी खोलिन हिमानीले ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
पति पारस शाहको राम्रा र नराम्रा बानीहरुको भेद यसरी खोलिन हिमानीले !
२०७४ साउन १६ सोमवार
काठमाडौं । पुर्ब युवराज्ञी हिमानी शाहसंगको ताजा अन्तरवार्ता, परिवार र भविष्यबारे मनका कुरा साथै हिमानी ट्रष्टको गतिबिधिमा केन्द्रित छ ।
हिमानी शाहको जन्म अक्टोबर १, १९७६ मा नेपालमा भएको हो । हिमानी भारतको राजस्थानको शिखर राज्यका राजपुत विक्रम सिहं र विपुला सिहंकी पुत्री हुन् । सूर्यवंशी सिखवत राजपूत उनले ग्यालेक्सी पब्लिक उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकी हुन् ।
तत्कालिन युवराज पारससंग विवाहबन्धनमा बांधिएसंगै उनी अधिराजकुमारी भइन् । दरबारहत्याकाण्डपछि ससुरा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए, पारस र हिमानी राजउत्तराधिकारी । पूर्व अधिराजकुमारी भएता पनि हिमानी सरल स्वभावकी देखिन्छिन् । देश गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएपछि उनी हिमानी ट्रष्टमार्फत समाज सेवामा सक्रिय छन् । तीन सन्तानकी आमा हिमानीको सौन्दर्यबाट प्रभावित नहुंने सायदै कोही होला । विरलै संचारमाध्यमसंग बोल्ने हिमानीले नेपालआजको म्यागजिन प्रकाशन होपका लागि दिएको अन्तवार्ता यहां साभार गरिएको हो ।
हिमानी ट्रष्ट कस्तो संस्था हो ?
हिमानी ट्रस्ट नेपालका गरिब व्यक्तिलाइ सहयोग गर्न बनाइएको गैरनाफामुलक र गैरराजनीतिक संस्था हो ।
आफ्नै नाममा संस्था खोल्ने सोच कसरी आयो ?
हामी राजपरिवारका सदस्यहरु सामाजिक कार्यहरुमा सदा आबद्ध रहदैँ आएका छौँ । मुमा बडामहारानी रत्नले बालमन्दिर स्थापना गरिबक्सेको हो । बडामहारानी एश्वर्याको सक्रियतामा समाज कल्याण परिषद् जन्मिएको र हुर्किएको हो । राजकुमारी हेलेन शाह रेडक्रस र कुष्ठरोग निवारण केन्द्रमा सक्रिय होइसिन्छ । त्यस्तै राजकुमारी प्रेक्षा वीर अस्पतालमा स्वयमसेविकाको रुपमा बिरामीको हेरचाह गर्न सक्रिय होइसिन्थ्यो । मलाई समाजसेवामा लाग्ने प्रेरण मेरो परिवारका सदस्यहरुबाटै मिलेको हो । पीडामा परेका जो कोहीलाई पनि सकेको सहयोग गर्न चाहन्छु ।
हिमानी ट्रस्टको उद्देश्य के हो ? यसले क–कसलाई सहयोग गर्छ ?
महिला, युवा, बालालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरु लाई सहयोग गर्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको मानिसको जीवनस्तर उकास्नु हो । त्यसकारण यी सम्पूर्ण सहयोग आवश्यक परेका व्यक्तिहरुलाई समेटेको छ ।
यो संस्थाबाट कति मानिसहरुले लाभ लिइरहेका छन् नि ?
वास्तवमा हामीले हाम्रो कामबाट कतिजना लाभान्बित भए भनेर रेकर्ड त राख्ने गरेको छैनौं । सानाठूला परियोजनाहरु मार्फत केही जिल्लाहरुमा सहयोग गरिरहेका छौं । हामीले दुई ठूला परियोजनाहरु दोलखा जिल्लामा सञ्लालन गरेका थियौं । जहाँ मानिसहरुलाई आवश्यक पानी दिइयो , शौचालयहरु बनाइयो , विद्यार्थीहरुलाई पोशाक र कापीकलम बाँडियो । महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थियौं । दोलखाबासी सम्पूर्णलाई हामीले बिभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरेका थियौं । सुदूरपश्चिमका बाढी पिडीतलाई सहयोग गर्यौं । झन्डै १०,००० व्यक्तिहरुलाई यस संस्थाले सहयोग गरिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई पनि हामीले सहयोग गर्यौं ।
तपाइको यस संस्थाबाट अरु के–कस्ता कार्यक्रमहरु गर्दैछ ?
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा रहेका असक्षम व्यक्तिहरुलाई हाम्रो साथ सहयोग निरन्तर रहनेछ । निकट भविष्यमै महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनेछौं ।
कार्यक्रमको लागि आर्थिक व्यबस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामी हाम्रो परिवारबाटै उठाउछौँ । देशबिदेशमा रहेका हाम्रा शुभेच्छुकहरुबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ ।
धेरै मानिसहरुले तपाईले राजनीतिक पृष्ठभूमी बनाइराख्नुभएको छ हिमानी ट्रष्टमार्फत भन्छन् नी ?
मानिसहरुलाई जे मनलाग्छ त्यो भन्न दिनोस् । हामी मन, वचन र कर्मले निःश्वार्थ सहयोग गरिरहेका छौं ।
तपाईले साधारण मानिसहरुसँग अन्तक्र्रिया गरिसकेपछि , देशको सामाजिक आर्थिक अवस्थाका बारेमा बुझ्नुभयो । यसलाई कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
पीडामा रहेका मानिसलाई देख्दा मेरो मन रुन्छ । बास्तवमा यी मानिसहरुका दूर्दशाकै कारणले गर्दा मलाई उनीहरुको पीडामाथी मलम लगाउन उत्प्रेरित गर्छ । सम्भव भएसम्म म सबैको अनुहारमा खुःसी देख्न चाहन्छु ।
तपाई समाजमा के परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ ?
म मेरो देशमा सबै मानिस शिक्षित होउन् भन्न चाहन्छु । शिक्षाले नै मानव जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । यहाँ धेरै देशहरु छन्, जहाँ जनसंख्या धेरै छ, देश गृहयुद्घमा फसिरहेको छ । विभिन्न बिचारधाराका व्यक्तिहरु छन् र फरक समस्याहरु छन् । तरपनि उनीहरु धेरै विकसित छन् ।
तपाईको विचारमा नेपालमा चाहिँ कम विकसित हुनुमा के लाग्छ ?
हामी भूपरिबेष्ठीत देशका नागरिक हौं । यहाँ नै छ ठूलो फाइदा र बेफाइदा । हामी कुन बास्तविक धरातलमा छौं भन्ने कुरामा भर पर्दछ । हामीले पूर्णरुपमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । बाली प्रशस्त रुपमा उत्पादन गर्न कृषि आधुनिकिकरणको खाँचो छ । हामीले हाम्रो जडिबुटी , बनस्पति र जीवको विशाल धन भुल्नु हुँदैन । नेपाल गरीव देश हो ? होइन । हामीले यो देशको मुहार फेर्नलाई कडा परिश्रम गर्नुपर्छ ।
बिहे अगाडिको जीवनका बारेमा बताइदिनोस् न ।
म एक्लै हुर्किए, मेरो आमा होइसिन्नथ्यो । म सँगै दुईजना दिदीबहिनीहरु छन् । हामी धेरै हेरविचार गर्ने र मायालु वातावरणमा हुर्केका थियौं ।
तपाईका शोखहरु के के छन् ?
घोडा चढ्ने, गीतसंगीत सुन्ने र किताब पढ्ने ।
सबै मानिसका राम्रा र नराम्रा बानीहरु हुन्छन् । पति पारस शाहको एउटा राम्रो र एउटा नराम्रो बानी बताइ दिनुस् न ?
म यो कुरामा विश्वास गर्दछुकी, मैले अरुको बारेमा राम्रो वा नराम्रो कुरा गरेर केही पाउन सक्दीन ।
तपाईप्रति ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाह ले कस्तो व्यवहार गर्नहुन्छ ?
उहाँहरुबाट मैले धेरै माया पाएको छु । बुहारी हैन, छोरीको व्यवहार गरिबक्सन्छ ।
तपाईका छोराछोरीहरु के गर्दै छन् ?
उनीहरु यहिँ नेपालमा पढिरहेका छन् ।
तपाई आफ्नो छोराछोरीलाइ कति समय दिनुहुन्छ ?
आमाको लागि छोराछोरी भनेको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । म उनीहरुले चाहेको बेला जतिबेला पनि समय दिन सक्छु ।
एउटा व्यक्तिको रुपमा, तपाईका असल गुणहरु के के छन् ?
मेरो विचारमा, मान्छेले आफ्नो गुणहरु आफैंले बताउन सक्दैन । यो त अरुले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा हो नि, हैन र ।
तपाई प्रतिकुल अवस्थालाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ?
धैर्य भएर ।
तपाईको विचारमा, मानिससँग हुनैपर्नै गुणहरु के के छन् ?
सबै व्यक्तिमा मानवता हुनुपर्छ ।
तपाईको लागि परम आनन्द के हो ?
शान्तिपूर्ण वातावरण ।
के तपाई अध्यात्मवादमा रुची राख्नुहुन्छ ? तपाई भगावानको विश्वास गर्नुहुन्छ ?
मानव भएको नाताले, म भगवानमाथि विश्वास गर्छु । सबैले यस जीवनमा राम्रा काम गरेर मुक्तिको बाटो खोज्छन । मपनि त्यहीं चाहन्छु ।
तपाई आमा, श्रीमती, बुहारी र समाजसेवी यी सबै भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त , तपाईले आफ्नो उद्देश्य, जिम्मेवारी र योजनाहरु राम्रोसँग बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यी सबै भूमिकाहरु आफैं व्यवस्थित हुँदै जानेछन् ।
तपाई खुसी लाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
खुसी भनेको त्यो क्षण हो, जहां भगवान र राम्रो कामबाट नतिजा प्राप्त हुन्छ । यसले समाजको लागि अनि आफ्नै लागि पनि सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ ।
तपाई छुट्टीमा के गर्न चाहनुहुन्छ ?
नेपालमा बच्चाहरुसँग बस्न खेल्न ।
तपाईको जीवनको दर्शन के हो ?
मेरो जीवन दर्शन साधारण छ । हरेक दिन सिक्नको लागि हो, सिक्न छोड्नु हुँदैन ।
महिलामा नभइ नहुने विशेषताहरु के हुन् ?
धैर्यता र घरलाई घर बनाउन सक्नु पर्छ ।
डा गोबिन्द केसी को जायज माग पूरा हुन्छ, कसैले आन्द्रादेखिको बल लगाउन जरुरी छैन: मन्त्री लालबाबु पण्डित
२०७५ साउन ५ शनिवार
शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा कांग्रेस कार्यकर्ता पसेपछि....
समृद्धिको खाका अनुसार सरकारले नयाँ शिक्षा नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ : प्रम ओली
राष्ट्रियता, स्वाधिनता र अखण्डताको रक्षा अहिलेको महत्वपूर्ण विषय : भट्ट
जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने माध्यम यौन !
धरान उप-महानगरपालिका प्रमुख सुब्बाको अन्तिम दाहसंस्कार मा हजारौं सहभागी
एक साताभित्रै इन्टरनेट आधा सस्तो हुन्छ, आफुखुसि मूल्य बढाएर सरकारलाई दोष : सञ्चार मन्त्री बास्कोटा
२०७५ साउन २ बुधवार
डा केसी हेलिकोप्टर चढ्ने बित्तिकै नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे यस्ताे ट्वीट
२०७५ साउन ३ बिहीवार
आजदेखि जिल्लामा रहने र खारेज हुने कार्यालयहरुको नामावली
२०७५ साउन १ मंगलवार
अध्यक्ष कार्कीले खोले डरलाग्दो तथ्य: देउवाले गायव पारे चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन !
इन्टरनेटले मूल्य घटाउनुको साटो बढाएकोमा सरकार हस्तक्षेप गर्ने योजनामा-मन्त्री बास्कोटा
प्रतिकारमा उत्रने युवा संघ र अनेरास्वबियू काे चेतावनी: हेक्का होस हाम्रो प्रतिरोधि क्षमताको मृत्यु भएको छैन